5 कारणहरु तपाइँ भगवान लाई राम्रो संग जान्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ प्रार्थना बिन्दुहरु
घर ईश्वरीय बैठक5कारणहरु तपाइँ भगवान लाई राम्रो संग जान्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ
आज हामी5कारणहरु संग व्यवहार गरीरहेछौ कि तपाइँ भगवान लाई अझ राम्ररी जान्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ। भगवान संग एक मानक सम्बन्ध सबैभन्दा राम्रो कुरा हो कि कहिल्यै एक विश्वासी संग हुन सक्छ। हाम्रो सृष्टिको सार भगवान संग koinonia छ। स्वर्ग र पृथ्वी को निर्माता उहाँका मानिसहरु संग सम्बन्ध को एक बाधा नभएको रूप चाहन्छ। थोरै आश्चर्य छ भगवान ईडन को बगैंचा मा साँझ को चिसो मा आदम संग कुराकानी गर्न को लागी अवतरण गर्नुहुनेछ। भगवान र आदम को बीच सम्बन्ध को प्रकार एक बिचौलिया रहित थियो। भगवान स्वयं तल आउनुहुनेछ र आदम संग कुरा गर्नुहुनेछ। त्यो सम्बन्धको प्रकार हो जुन भगवान प्रत्येक विश्वासी संग गर्न चाहानुहुन्छ।
जे होस्, जब पाप हुन्छ, यो सम्बन्ध abated र भगवान आफ्नो प्रेम को माध्यम बाट र कृपा मानिस संग सम्बन्ध को एक राम्रो तरीका खोज्न को लागी थियो। जसले पवित्र आत्मा को आगमन को लागी नेतृत्व गर्यो। ख्रीष्टको साथमा काम गर्ने प्रेरितहरुको ख्रीष्टमा एक निर्विवाद पहुँच थियो, केहि हद सम्म उनीहरु अरु कसैलाई भन्दा भगवान लाई राम्रोसंग जान्दथे। आफ्नो समय को समयमा प्रेरित पावल, यद्यपि उनी ख्रीष्ट लाई भेटेनन्, जे होस्, उनको ख्रीष्ट संग एक मुठभेड थियो र उनले ख्रीष्ट को बारे मा धेरै सुनेका छन्। प्रेरित पावल को पुस्तक मा भन्यो फिलिप्पी ३:१० कि म उहाँलाई जान्न सक्छु र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति, र उहाँको कष्टको सship्गति, उहाँको मृत्युको अनुरूप। भगवान को ज्ञान अनन्त छ, उहाँले मानिस को हृदय मा तिर्खा र भोक को स्तर अनुसार आफैलाई मानिस लाई प्रकट गर्दछ।
जब हामी भगवान लाई अझ राम्ररी चिन्ने कोसिस गर्छौं, उहाँ हाम्रो लागी अधिक देखिनु हुन्छ र हामी उहाँ लाई अझ राम्रो संग जान्दछौं। ईश्वरलाई अझ राम्ररी चिन्नुको मतलब तपाइँ कहिल्यै एक्लो हुनुहुन्न आवश्यकता वा समस्याको बेला। यदि यो पर्याप्त कारण छैन कि तपाइँ भगवानलाई अझ राम्ररी जान्न को लागी प्रयास गर्न को लागी, आउनुहोस् पाँच अन्य कारणहरु लाई हाइलाइट गर्नुहोस्:
Koinonia को लागी
जस्तै पहिले भनिएको छ, प्रमुख कारण तपाइँ भगवान लाई अझ राम्रो संग जान्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ उहाँ संग एक दिगो सम्बन्ध निर्माण गर्न को लागी। भगवान सबै समय बोल्नुहुन्छ, उहाँ सबै समय सुन्न चाहानुहुन्छ। तर जब मानिस र भगवान को बीच कुनै निरन्तर सम्बन्ध छैन, यो भगवान मात्र एक समय मा एक पटक बोल्ने लाग्न सक्छ।
भगवान को आत्मा सबै समय बोल्छ। उहाँ हामीसँग सधैं कुरा गर्न चाहानुहुन्छ। भगवान संग एक koinonia हुनु सक्रिय रूप मा सबै दिन अनलाइन रहनु जस्तै हो। तपाइँ जान्नुहुन्छ तपाइँ सबै रमाईलो अनलाइन बाट कहिल्यै याद गर्नुहुन्न। जे होस्, जब तपाइँ मात्र एक पटक एक पटक मा एक पटक इन्टरनेट को उपयोग छ, त्यहाँ धेरै चीजहरु छन् कि तपाइँलाई थाहा छैन। यो पनि कसरी भगवान काम गर्दछ, जब तपाइँ भगवान संग एक राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँले तपाइँलाई सबै समय बोल्नुहुन्छ।
हामी प्रार्थनामा छिटो प्रतिक्रिया पाउँछौं
किनभने उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ
के तपाइँ कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि स्वर्गका मेजबानहरु कहाँ थिए जब भगवान आदम संग कुराकानी गर्न आफ्नो महल मा उच्च छोड्नुभयो? के यसको मतलब यो हो कि त्यहाँ स्वर्गमा कोहि पनि भगवान संग कुरा गर्न सक्नुहुन्न कि उसले पृथ्वीमा तल आएर आदमलाई भेट्ने निर्णय गर्यो? परमेश्वरले मानिस सृष्टि गर्नुको कारण यो हो कि ऊ मानिस संग कोनोनिया छ। सानो आश्चर्य छ जब मानिस ईडन को बगैंचा मा असफल, भगवान अझै पनी त्यसमा रोकिनुभएन। उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरालाई क्रुस मा मर्न पठाउनुभयो ताकि मात्र मुक्ति मानवजाति लाई ल्याउन सकिन्छ र मानिसहरु को उपहार संग आशिष पाउन सकिन्छ पवित्र आत्मा.
भगवान के चाहानुहुन्छ उहाँ संग एक मानक सम्बन्ध छ र यसैले हामीले उहाँलाई अझ राम्ररी जान्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ। जब तपाइँ आज पवित्र आत्मा को वरदान संग आशीर्वादित हुनुहुन्छ, तपाइँ यसमा बढ्न थाल्नुहुन्छ। हुन सक्छ भगवान एक महिना मा एक पटक तपाइँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, जे होस्, भगवान त्यो भन्दा बढी चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहानुहुन्छ कि तपाइँ यस बिन्दुमा जानुहोस् कि उहाँ तपाइँको लागी एक निर्विवाद पहुँच हुनेछ। भगवान मानिस को बारे मा सजग छ, यही कारण छ कि उहाँ मानिस संग एक प्रकार को सम्बन्ध को निर्माण गर्नुहुन्छ कि उनीसंग अरु कुनै पनी उहाँ द्वारा बनाईएको संग छैन।
यसले हामीलाई पापलाई जित्न मद्दत गर्दछ
जति राम्रो हामी भगवान जान्दछौं, हामी भित्र भगवान को आत्मा बलियो हुन्छ। र धर्मशास्त्र भन्छ यदि यदि उहाँको शक्ति जसले ख्रीष्ट लाई मरेको बाट उठाउनु भयो, तपाइँ मा बस्नुहुन्छ, यसले तपाइँको नश्वर शरीर लाई छिटो बनाउनेछ। हाम्रो नश्वर शरीर पाप र अधर्म को बिरुद्ध छिटो गर्न को लागी आवश्यक छ। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई पापलाई जित्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ सधैं शरीर र आत्मा को बीच एक झगडा छ। अचम्मको कुरा हैन कि प्रेरित पावल मद्दत को लागी ठूलो स्वर मा रोए कि उनीहरुलाई यो गर्न गाह्रो छ कि उनीहरु गर्न चाहन्छन् गर्न को लागी गर्न को लागी, तर विश्वासपूर्वक उनीहरु गर्न चाहँदैनन्। जे होस्, जब ईश्वरको आत्मा हामी मा उचाईन्छ, पाप लाई पराजित गरिनेछ किनकि आत्माले हामीलाई शरीर को antics लाई परास्त गर्न को लागी शक्ति दिनेछ। धर्मशास्त्रमा भनिएको छ कि ईश्वरको आत्मा द्वारा नेतृत्व गर्नेहरुलाई भगवानका छोराहरु भनिन्छ।
भगवान लाई अझ राम्रो संग चिन्ने कोसिस मा एक ठूलो सम्झौता छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौं, हामी हाम्रो प्रार्थना को लागी छिटो प्रतिक्रिया पाउँछौं। जब हामी उहाँलाई अझ राम्ररी चिन्ने कोसिस गर्छौं तब हामी भगवान को नजिक हुनेछौं। भगवान आफैलाई उही अनुपात मा प्रकट गर्नुहुन्छ हाम्रो तिर्खा र भोक को लागी उहाँ को लागी। जब हामी भगवान को नजिक जान्छौं, हाम्रो आवाज सजीलै प्रार्थना को समय मा मान्यता प्राप्त छ र हामी हाम्रो अनुरोध को लागी छिटो प्रतिक्रिया पाउँछौं।
हामी आध्यात्मिक रूपमा बढ्छौं
हामी एक बच्चा ईसाई को कक्षा बाट स्नातक गर्न को लागी प्रयास गर्नुपर्छ। हामी भगवान लाई अझ राम्रो संग जान्न को लागी प्रयास गरीरहेका छौं आध्यात्मिक रूप मा बढ्न को लागी एक अझ राम्रो स्थिति मा राख्छौं। अन्धकार को शक्ति जो हाम्रो विरोधी छ लीप र सीमा मा हरेक दिन बढ्छ, हामी मंद रहन बर्दाश्त गर्न सक्दैनौं। जब हामी भगवान लाई अझ राम्ररी जान्ने कोसिस गर्छौं, यसले हामीलाई आध्यात्मिक रूप मा बढ्न मद्दत गर्दछ।
जब हामी आध्यात्मिक रूपमा बढ्छौं, हामी अन्धकार र यसको कामहरु मा कुल्चिन सक्छौं। यसो गरेर, हामी कहीं पनी हामी आफैंलाई अन्धकार को शक्ति को लागी एक आतंक बन्छौं। प्रत्येक ईसाई आध्यात्मिक रूप मा बढ्नु पर्छ, अन्यथा उनीहरु दुश्मन को शक्ति द्वारा कुल्चिएको हुनेछ। धर्मशास्त्र भन्छ कि तपाइँको शत्रु आराम गर्दैन, ऊ गर्जने सिंह जस्तै को बारे मा जान्छ कि कसलाई खाने को लागी खोजिरहेको छ। हामी आफैंलाई दुश्मन द्वारा भस्म हुन दिनु हुँदैन, हामी बढ्नु पर्छ र भगवान लाई राम्रो संग जान्न को लागी हाम्रो प्रयासले हामीलाई आध्यात्मिक रूप मा बढ्न मद्दत गर्दछ।
अघिल्लो लेखमा१० बाइबल पद तपाइँ बिर्सनुहुन्न जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ
अर्को लेखमाभगवान को अलौकिक नेतृत्व कसरी पहुँच गर्ने
छुटकारा प्रार्थना विवाह गर्नेहरू विरुद्ध बिन्दु
नयाँ रूपान्तरित ईसाईहरूको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू